Jireenya Baqattootaa : Gamannis Ibidda Gamasiis Ibidda |
WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) — Biyya irraa ka’anii gara Somaaliyaatti eega imalanii booda magaalaalee biyyatti lama irraa Roobii Hagayya 9 fi Kamisa Hgayya 10 bara 2017 galaana irraa gara YamanTti imaluu kan jalqaban lammiwwan Itiyoophiyaa fi Somaaliyaa dhuma irratti kanneen seeraan ala nama deddebisaniin galaanatti darbamuu isaanii dubbatu. Hedduun galaanaan nyaatamanii du’an. Hangi tokko immoo lubbuun hafuuf carromanii jiru. Kanneen lubbuun hafuuf carrooman keessa dubartii ulfa baatii 7 garaa qabduutu jira.
Oromiyaa keessatti hiriira gaggeeffamaa ture waliin wal qabatee abbaa warraa koo qabanii eessa akka buusan hin beeku. Anaan immoo halkan halkan dhufanii mana na bansiisanii na doorsisu na reebuu waan ta’eef ijaa fi gurra koo qabadhee gara Somaaliyaatti qajeele jetti. Shamarreen umriin 17 immoo haadhaa abbaa akka hin qabne garuu abeera isaanii biratti akka guddatan, sana booda obboleessa tokkittiin qabdu jalaa hidhamee jennaan lubbuu ofii oolchuuf jecha biyyaa ba’uu dubbatti. Balaa hamaan akkasii na irra ga’ee lubbuun hafuuf carromuus maaliifiin biyyaa ba’e jedhee hin gaabbu hin yaadus jetti.
Dargaggeesii umriin 25 immoo waa’een Oromoo biyya keessattis ta’e biyyaas ba’anii jireenya godaantrummaa keessatti qabbana hin qabu jedha. Waa’ee lubbuu ofii du’a irraa olchuu malee waan isaan mudachuuf jiru yaaduuf yeroon hin jiru jedhu.